asa sy asa | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: asa sy asa
Mpiandraikitra mpanampy: Andraikitra sy toetra manokana
Mpanampy manokana an'ny mpitantana dia asa iray izay be fangatahana amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra, mifamatotra amin'ny fampivoarana ny toekarena eny an-tsena izy io, satria raha tohanana ny fifaninanana henjana, miankina amin'ny toe-bolan'ny orinasa ...
Injeniera rafitra indostrian'ny indostria: famaritana asa ny injeniera amin'ny rafitra fanaraha-maso automatique
Inona no ataon'ny injenieran'ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy? Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity izany. Momba ny asa Ahoana no hamaritanao fohifohy ilay asa voalaza? Injeniera ACS TP dia olona iray izay ...
Mpiandraikitra ny trano fisakafoanana: adidy, andraikitra. Ahoana ny fomba fitantanana trano fisakafoanana?
Ny trano fisakafoanana dia toerana alehan'ny olona miala sasatra, ahafahan'izy ireo miala sasatra, manandrana sakafo matsiro matsiro, mihaino mozika tsara. Fa ho an'ny sasany, ny trano fisakafoanana dia asa. Ary ny mpitantana trano fisakafoanana - ...
Mpanome ny ala: takiana, endri-javatra
Feller dia asa iray izay tena lehilahy mahay ihany. Ity asa ity dia mitaky tanjaka ara-batana miavaka sy fahaizana efa voahaja tsara. Ary raha manana olana manokana ry zalahy amin'ny voalohany ...
Inona no hitranga amin'ny fiainana? Ahoana no fanaovana safidy tsara?
Iza no mbola tsy nametraka ireto fanontaniana ireto tamin'ny fiainany: "Inona no hitranga amin'ny ho avy? Asa inona no safidiana? " Noheverinay fa mora be izany. Ny sasany nilaza fa ho mpamorona endrika, ny hafa - dokotera, ...
Mpanadio rano simika: famaritana asa, endri-panofanana sy famerenana
Ny injenieran'ny angovo hafanana dia iray amin'ireo faritra iasa ilaina indrindra. Izany no antony maha-zava-dehibe ny asan'ny mpandraharaha misahana ny rano simika. Ny sombintsombiny sy ny mampiavaka an'io asa io dia hodinihina bebe kokoa. OMS…
Miasa ao amin'ny Magnet: hevitra sy hevitra
Aza maika hahazo asa nefa tsy mahalala na inona na inona momba an'io. Soa ihany fa izao dia mora kokoa ny manao an'io, noho ny Internet sy ny fanirian'olombelona hizara alahelo na "hanary" ny marina. Ohatra,…
Mpamily fiara. Famaritana ny asa, karama
Ny asan'ny mpamily dia iray amin'ny fangatahana be indrindra amin'ny firenena maro. Ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa fitaterana dia mampitombo ny takiana amin'ny mpamily sy ny kalitaony matihanina. Ny safidin'ity asa ity dia tsy midika hoe finiavana handany ...
Fomba fiasa mihodina (shift). "Stakhanov": famerenana ny mpampiasa manome asa amin'ny fihodinana
Amin'ny fotoana izay sarotra ny mahita asa, maro ny matihanina no mitady fomba hafa. Ny lehilahy sy ny vehivavy manana tanjaka ara-batana sy faharetana dia liana amin'ny fahabangan-toerana izay manome fomba fiasa mihodina. Fepetra izay ...
Iza ilay speleology? Inona no ataon'ny caver? Inona no atao hoe fanadihadiana momba ny speleology?
Iza ilay speleology? Misy fanontaniana mitovy amin'izany mipoitra amin'ny olona maro izay efa nandre ny anaran'ny iray amin'ny asa mampidi-doza sy mahasoa indrindra. Ny tena izy dia tsy io no asa mahazatra indrindra, tena ...
Ny recruiting dia ... Fomba sy fomba hisarihana kandidà mety amin'ny toerana
Ny recruiting dia mitovy dika amin'ny hoe "hiring", nalaina avy amin'ny American English. Ity teny ity dia manondro ny fizotry ny fisintomana, ny fisafidianana ary ny fankatoavana ireo mpilatsaka ho fidiana mety amin'ny asa maharitra na vonjimaika ...
Asa fakana fanahy: "packer". Tsy tsotra izany…
"Mitady asa amin'ny packer" - ny dokambarotra toy izany dia tena tsy fahita firy, satria tsy misy asa misy an'io anarana io. Orinasa misakafo, ary trano fanatobiana entana sasany, ary orinasa mpamokatra ...
Ny governess dia…. Ny dikan'ilay teny hoe "governess". Inona ny asan'ny governess?
Rehefa mamaky na maheno ny teny hoe "governess" ianao dia samy manana ny fiarahany manokana ny olona tsirairay. Tsy haiko hoe manana an'iza io olona io, fa ho ahy ny governess, voalohany indrindra, ny sary haisoratra nataon'i Maria ...
Miaramilan'ny tafika ao Rosia
Noho ireo fanavaozana natao tato ho ato tao amin'ny Tafika Rosiana an'ny Federasiona Rosiana, nitombo be ny andraikitry ny tafika ao amin'ny firenena. Ankehitriny ny asan'ny miaramila dia tsy anaram-boninahitra amam-boninahitra sy karama mendrika fotsiny, fa ...
Ny asa farany farany amin'ny taonjato 21. Ny matihanina indrindra notadiavina tamin'ny taonjato 21
Fa maninona no mipoitra ny asa vaovao? Satria ny faritany vaovao dia novolavolaina tamin'ny heviny ara-bakiteny sy an'ohatra. Manomboka liana amin'ny zavatra hafa tanteraka ny olona, ​​mamorona sehatra hafa ho an'ny famoronana ary, ...
Tale Mpanatanteraka Andraikitra sy zony
Ny toeran'ny CEO dia mihabetsaka hatrany amin'ny orinasa izay tafiditra amin'ny hetsika isan-karazany. Rehefa mangataka ity banga ity dia tokony ho fantatrao izay andraikitra sy zon'ity mpiasa ity. Ny asan'ny talen'ny mpanatanteraka dia misy lafiny maro ...
Fa maninona aho no mila karangan'ny mpampianatra akanin-jaza ho an'ny portfolio iray?
Fotoana vitsy lasa izay, nisy fenitra vaovao noraisina ho fanamarinana ireo mpiasan'ny andrim-pianarana fanabeazam-pianakaviana (DOW). Ankoatry ny antontan-taratasy manamarina ny fanarahan'ny matihanina ny toerana notanana dia ilaina ihany koa ny manomana lahatsoratra ho an'ny mpampianatra akanin-jaza. Ho an'ny portfolio, ity dia ...
Inona ny mekanika? Famintinana momba ny matihanina
Inona no atao hoe mekanika? Toa asa tena tsotra io, tsy misy sarotra. Fa ilaina ny mahatakatra kely, ary tonga dia mazava - tsy ny olon-drehetra no mahay mahafehy azy. Rehefa dinihina tokoa, ity manam-pahaizana manokana ity dia mitazona ...
Ny mpanjaitra dia olona manana asa famoronana
Tsy takona afenina fa ny palitao dia mifanentana amin'ny tarehimarika raha toa ka ampanjifaina tsara sy nozairina tsara. Betsaka ny olona maniry ny manamboatra manokana ny atelier. Miaraka amin'ny karazan-javatra vonona rehetra, dia mila zavatra foana ianao ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 122 Next Page
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 2,964.